WINDOWS ကို 10 ရက်နေ့တွင် DIRECTX ကို REINSTALL လုပ်ဖို့ဘယ်လို - WINDOWS ကို - 2019
Windows ကို 10 ရက်နေ့တွင်ပျောက်ဆုံး DirectX ကိုအစိတ်အပိုင်းများကိုပြန်လည်နှင့်ဖြည့်စွက်
multiplayer ဂိမ်းများ, ကစားသမားများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဂိမ်းစုစည်းနိုင်အောင်, အသံဆက်သွယ်ရေးများအတွက်ဒီဇိုင်းအစီအစဉ်များအမျိုးမျိုးကိုပိုနှစ်သက်သူကိုဂိမ်းကစားဘို့။ မကြာသေးမီကကွဲပြားခြားနားသောအရည်အသွေးကိုအစီအစဉ်များကွန်ယက်အတွက်ဖြန့်ဝေနေကြသည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သက်သေပြအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ထဲမှတစ်ဦး RaidCall အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
RaidCall - ဂိမ်းကစားတို့တွင်လူကြိုက်အများဆုံးအစီအစဉ်များ၏တဦးတည်း။ ဒါဟာချက်တင်အတွက်အသံဖြင့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းထောက်များရှေ့တွင်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ သင်တီဗွီကင်မရာအကျင့်ကိုကျင့်ချိတ်ဆက်ခဲ့ကြပါလျှင်ဒီနေရာတွင်လည်း, သင်တန်းဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု, စေနိုင်သည်။ Skype ကို RaydKall မတူဘဲအထူးဂိမ်းကာလအတွင်းဆက်သွယ်ဖို့အသုံးပြုသူများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။
RaidCall အမြဲစီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်ကို run ။ အရှင်အစီအစဉ်စနစ်အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့အခွင့်အာဏာသည်။ ချက်ချင်းထိုကဲ့သို့သော GameBox နှင့်အခြားသူများအဖြစ်ပထမဦးဆုံးပြေးဆိုတဲ့စကားလုံးမလိုတော့ဘူးဝန်အစီအစဉ်များအပြီးတွင် RaidCall ။ သင်ဤကိုရှောင်ရှားချင်လျှင်, ထို program ကို run မတိုင်မီဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ:
ဆက်ဆက် RaidCall အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနိုင်ပါတယ်နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆို။ အဲဒီအစားကအုပ်စုတွင်အသံဖြင့်ချက်တင်ဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ပါတယ်။ ဂိမ်းစဉ်အတွင်းကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစုစည်းဖို့ကူညီပေးသည်။ စကားမစပ် program ကိုလက်တွေ့ကျကျစနစ် load မပါဘူး, ဒါကြောင့်သင်လုံခြုံစွာကစားနိုင်ပြီးဂိမ်းနှေးကွေးလိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်ပူပန်ကြပါဘူး။
အဆိုပါ tab ကို "ဗီဒီယိုကိုပြသပါ" တွင်သင်သည်သင်၏ webcam ကို အသုံးပြု. ဆက်သွယ်ပြောဆိုနှင့်လည်းအွန်လိုင်းထုတ်လွှင့်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ရုံ Voice ကိုကာလ၌ရှိသကဲ့သို့, ဒီအင်္ဂါရပ်သာအုပ်စုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ထိုသို့မယ့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်မဟုတ်, သာအကြံပြုခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင်သင်ချက်တင် built-in သုံးပြီး chat လို့ရပါတယ် RaidCall ။ အဆိုပါ
RaydKall အတူသင်တို့သည်သူ၏အဖော်မှစာရွက်စာတမ်းများပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းစွာဖိုင်လွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတော်လေးအချိန်ကြာမြင့်စွာကြာပါသည်။
ထို program ၏နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့အင်္ဂါရပ် channel ကိုသို့ဂီတထုတ်လွှင့်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်နေရာတစ်နေရာယူသောသူအပေါင်းတို့သည်အသံဖြစ်ရပ်များထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်သည်။
အဆိုပါအစီအစဉ်၏အင်္ဂါရပ်များတစ်ခုမှာ - ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပျစု (ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်အခန်းတစ်ခန်း) ကိုဖန်တီးရန်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးပြုသူအွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးများအတွက် RaidCall3အုပ်စုများဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာ "ဂိမ်းများ" ကဲ့သို့သော၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်သတ်မှတ်, ထိပ် menu bar ထဲက 'Group မှ Create "နှင့်ဦးစားပေးအုပ်စုတစ်စုအဖြစ် 1 မှ4ဂိမ်းကနေ select လုပ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါအလွယ်တကူပြုမိသည်။ သင်တို့သည်လည်းအုပ်စု၏အမည်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်, သင်အုပ်စု settings ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
RaidCall ကိုမဆိုအသုံးပြုသူအတွက်, သင်ကအမည်ပျက်စာရင်းမှသူတို့ကိုထည့်နိုင်သည်။ သငျသညျမိမိအမက်ဆေ့ခ်ျများငြီးငွေ့လျှင်သင်, အုပ်စုထဲမှာမဆိုအသုံးပြုသူကိုလျစ်လျူရှုနိုင်ပါတယ်။
စနစ်ကသယံဇာတများ 1. အနိမျ့စားသုံးမှု;
4. Program ကိုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်;
RaidCall - အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးများအတွက်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲပရိုဂရမ်တစ်ခု, အသံလူမှုကွန်ယက်အဖြစ်နေရာယူထား developer များ။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်အရင်းအမြစ်များက၎င်း၏နိမ့်စားသုံးမှုကြောင့်အသုံးပြုသူများကိုအကြားလူကြိုက်များသည်။ ဒီနေရာတွင်, အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု chat နှင့်အဖွဲ့များကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
အခမဲ့ RaidCall Download
RaidCall အတွက်ကို run ပတ်ဝန်းကျင်အမှားပြုပြင်တာတွေ RaidCall သုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို အလုပ်မ RaidCall ။ အဘယ်သို့ပြုသနည်း RaidCall အတွက်အကောင့်တစ်ခု Create
RaidCall - ဂိမ်းကစားမှာကိုပစ်မှတ်ထားနှင့်စကားစမြည်ကာလအတွင်းနိမ့်ဆုံးနှောင့်နှေးသေချာသောအင်တာနက်မှတဆင့်အသံဖြင့်ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်အခမဲ့ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။